YouTube Videos တွေကို မြန်မြန်ကြည့်ရအောင်! - MYSTERY ZILLION
YouTube Videos တွေကို မြန်မြန်ကြည့်ရအောင်!
ZombYard April 2011 edited April 2011 in Internet & Email Gmail, Google Code, Mpas စသည့် ဟာတွေမှာဘဲ Labs ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး၊ YouTube မှာလဲ Labs မဟုတ်ပေမဲ့TestTube ဆိုပြီး Experiment တခု လုပ်ထားပါတယ်။ အလွယ်တကူ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ Blogger In Draft လိုပေါ့၊တကယ့် Blogger မှာ Release မလုပ်ခင် Draft မှာအရင်စမ်းပါတယ်။ အောင်မြင်ပြီး Ok သွားပြီးဆိုမှာ Blogger မှာRelease လုပ်လိုက်တာပါ။ အခုဆိုရင် Blogger မှာ Mobile Version Temple လေးလဲ သူတို့တွေ ထွင်နေကြပါပြီး။Blogger In Draft ကိုသွားပြီး Settings > Email & Mobile မှာသွားပြီး Activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်YouTube Experiment ဖြစ်တဲ့ Test Tube မှာ Feather ဆိုတာလေး ရှိပါတယ်။ Video Editor လေးဆိုတာလဲ ရှိပါတယ်။Feather ကတော့ YouTube မှာရှိတဲ့ Videos တွေကို Low Quaility နဲ့ကြည့်လို့ရအောင် လုပ်ထားတာပါ။ Low Qualityဆိုပေမဲ့ ကြည့်ရတာ တကယ့် HD လိုပါဘဲ။ တော်တော်လေးကို ကြည်ပြီးတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ တော်တော်မြန်ပါတယ်။ခဏ ခဏလဲ မရပ်တော့ပါဘူး။ပထမဦးဆုံး http://www.youtube.com/testtube ကိုသွားလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ အဲ့ဒီ Page မှာ ကောင်းတဲ့ ဟာလေးတွေ တော်တော်များများ YouTubers အတွက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောင့်ကိုနဲနဲ Scroll သွားပြီး Feather ဆိုတာလေးကို Try It Out လိုက်ပါ။ပြီးရင် နောင့် Page တခုရောက်သွားပါ့မယ်။ အဲ့ဒီမှာ ရောက်ရင် စာတွေကိုလဲ ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်ပေါ့။ အဓိက လုပ်ရမဲ့ဟာက Join ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ယုံပါဘဲ။ ဒီ Step လေးက ကျွန်တော်မပြောလဲ သိပြီးသားဖြစ်နေပါ့မယ်။ပြီးသွားရင်တော့ YouTube မှာရှိတဲ့ Video လေးတွေကို သွားပြန်ကြည့်ကြည့်ပါ။ တော်တော်လေးကို Load တာမြန်လာပါ့မယ်Related Videos တွေနဲ့ Comments တွေကိုတော့ Video Loads မှာ နှေးမှာကြောင့်လို့ သူတို့ Customize ထားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းလေးကSpeedBit Video Accelerator ထက်တောင်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျား။SpeedBit Video Accelerator ကလဲ YouTube ကို ကြည့်ရတာ မြန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ YouTube VideoEditor လေးကို ကြားဖူးထားတာ ကြာပြီး တခါမှ မစမ်းကြည့်ရဘူးလို့ ဆိုပြီး သွားစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာ Feather ကဘာမှန်းကိုမသိတော့ ကျွန်တော်လဲ စမ်းကြည့်လိုက်တာ အဲ့ဒီမှာစတွေ့တာပါဘဲ။ ကဲစမ်းချင်သူများ Feel Free To Test ပါခင်ဗျား။Ref: http://www.kyawswarnyein.com/2011/01/how-to-watch-videos-faster-on-youtube.html Tagged:
sayarjunjun April 2011 edited April 2011 Registered Users အခုတင်ထားတာတွေကဖတ်မရလို့ပါ......ပြီးတော့ youtubeမှာ videoကကြည့်လို့မရလို့ပါ...errorဆိုပြီးပေါ်နေတာအဲဒါလေးပါ အဆင်ပြေရင်ထပ်ဖြည့်ပြီးတင်ပေးပါ Erase April 2011 edited April 2011 Registered Users sayarjunjun;85347 said:အခုတင်ထားတာတွေကဖတ်မရလို့ပါ......ပြီးတော့ youtubeမှာ videoကကြည့်လို့မရလို့ပါ...errorဆိုပြီးပေါ်နေတာအဲဒါလေးပါ အဆင်ပြေရင်ထပ်ဖြည့်ပြီးတင်ပေးပါ
myanmar3font လိုလို့ပါ။ K April 2011 edited April 2011 Moderators Last edited by saturngod; Today at 08:55 AM. Reason: change to zawgyi ZombYard April 2011 Registered Users it's not the YouTube that's is showing error, just because of u guys computer connection. စိုင်းညီဖြိုး April 2011 Registered Users hacker တွေ ဒီလောက်များသာ.. ဘာလို့.. သူတို့ နဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဆိုက်တွေကိုတော့.. နည်းနည်းလောက်ကလေး ဖောက်ပေးမယ့်သူ မရှိရတာလဲ ။ .. ဘယ် ဆိုက်ထဲ ဝင်လို့ဘယ်လောက်နှေးတယ် .. ဘယ်လို ဝင်လို့မရဘူး ဖြစ်တယ် ပြောပြော..သူတို့ဆိုက်တွေထဲများ ဝင်လိုက်ကြည့်.. ဘယ်တော့မှ Access Denied တွေ .. Network Error တွေ တက်တယ်ဆိုတာ မတွေ့ရဘူး။ ZombYard April 2011 Registered Users ဟားဟား နာမလည်ဘူးဗျ။ ရှင်းအောင်ပြော.. ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ.. yixin April 2011 Registered Users စကားမစပ် Youtube ပွင့်နေတယ်နော်။ http နောက်မှာ s ထဲ့လိုက်ရင်ရတယ်။ ပွင့်နေတာကြာဘီလား?? *(Txant)* April 2011 Registered Users ဟုတ်ေတာ်ေတာ်ေလးြကာေနပါြပီ..........သတိမထားမိြကလို့ြဖစ်ပါလိမ့်မယ်....... Undergarden May 2011 Registered Users How can I save you tube video.I copy the address of the video and download by using video downloading sites ie. feelingtea.com,keepvid.com. But errors occur. So, what would I do to download you tube video. yarzar_dot_me May 2011 Registered Users Ckh out here : http://www.mysteryzillion.org/discussion/10184/i-want-to-download-video-file-from-you-tube- Undergarden May 2011 Registered Users Thinkalot ko yarzar. hipper88 June 2011 Registered Users Bro Yarzar. I Could not found. Pls help me how to download You Tube Video. Erase June 2011 Registered Users You tube က Video တွေကို ဒေါင်းချင်ရင် internet download manager ကိုအသုံးပြူပြီ ဒေါင်းလို့၇ပါတယ်။ နောက် firefox ကိုသုံးတယ် ဆိုရင် add-ons သွင်းပြီဒေါင်းလို့ ၇ပါတယ်။ https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/easy-youtube-video-downl-10137/ K June 2011 Moderators Ko @yarzar_dot_meI think your links in http://www.mysteryzillion.org/discussion/10184/i-want-to-download-video-file-from-you-tube- post didn't work. ?? 404 Not Found. empty013 April 2012 Registered Users Brother, You tube က videos တွေကို download လုပ်ချင်ရင်ဘယ်softwareကိုသုံးရမလဲ download managerကသိပ်မသုံးတက်လို့ပါတခြားဘာတွေရှိသေးလဲရှိရင် ကျွန်တော့်mail([email protected])ကိုပို့ပေးပါနော် DragonVirus April 2012 Registered Users You can use IDM or some addons in Browser ... htetaungzaw1993 May 2012 Registered Users YouTube Downloader & Convertor is too easy to download videos from YouTube. HlaingMinTun May 2012 Registered Users You tube က videos တွေကို download လုပ်ချင်ရင် ဘာsoftware မသွင်းလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ Add on ကနေDownloadhelper တင်လိုက်ရင်ရပါၿပီးခင်ဗျာ။ Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla